TOP 10: Maxaad Ka Taqaanaa Tobanka Atariisho Ee Sanadkaan 2016 Ugu Taajirsan Bollywood-ka, Priyanka Chopra Oo Meel Lama Filaan Ah Kasoo Muuqatay ,,, - Hablaha Media Network
HMN:- Qiimeeyntii ugu dambeeysey ayaa lagu sameeyey sanadkaan 2016 daqliga ay heeystaan ama usoo xarooday xidigaha Bollywood-ka gaar ahaan hablaha ,waxaana ay warbixintaan ka hadleeysaa 10-kii Atariisho ee ugu muhiimsanaa sanadkaan 2016 & lacagaha ay shaqeeysteen.
Atariishooyinkaan ayaa ku raaxeeysteen guulo sanadkaan , kuwa kalena waxaa ay heer sare ka gaareen Bollywood-ka maadaama ay wax badan kusoo dhex jireen xirfadaan ,waxaase yaab leh markaad aragto halka ay ku jirto Priyanka Chopra.
Priyanka Chopra sanadkaan ma qaban shaqo yar laakiin waxaad dareemeysaa in magac ka sameeysey , laakiin aan wax lacag ah soo xareeyn maxaa yeelay waxaa ay qiimeeyntaan ay kasoo gashay booska 10aad.
Shaqsiyaadkaan hada daraasada lagu sameeyey waa kuwii ugu caansanaa laguna kalsoonaa, waxaana sanadkaan usoo xarooday daqli aan caadi ahayn qaarkood.
Hadaba Hoose Kala Soco Qiimeeynta Oo Ka Bilaabaneysa Qeeybta Hoose
10: Priyanka Chopra (Net Worth: $8 Million)
Aktarada magaca ugu weeyn ka sameeysey Bollywood-ka ayaa meel aan laga filan kasoo gashay qiimeeyntii ugu dambeeysey la sameeyey ee dhanka daqliga.
Xaqiiq inay aktaradaan ay sameeysey magac weeyn dhanka Bollywood-ka iyo Hollywood-ka waxaana ay hada heeysataa oo Account keeda ku jirta $8 Million.
Atariishadaan oo sanadii 2000 loo doortay atariishadii ugu fiicneeyd aduunka ayaa hada ku mashquulsan filimaan ,waxaase aktaradaan sido kale ay ku guuleeysatay hadiyada kala duwan ,waxaana kamid ah National Film Award, IIFA Awards, Star Guild Awards and Screen Awards.
9: Preity Zinta (Net Worth: $10 Million)
Aktaradaan oo dhalatay 31 January 1975 ayaa booska sagaalaad kasoo gashay liiskaan , waxaana ay kasoo muuqatay heerarka kala duwan ee dhanka Bollywood-ka.
Aktaradaan waxaa ay heeystaa markii cel celis ahaan ama daqligeeda la qiimeeyey $10 Million.
8: Mallika Sherawat (Net Worth: $10 Million)
Dhanka Model-ka ama soo jiidashada Aktarada loo dhaafay ee Mallika Sherawat ayaa iyana kasoo muuqatay qiimeeyntaan , waxana ay aktaradaan heeystaa daqli iska heer dhexe waaana $10 Million.
Waxaa lagu xusuustaa gabadhaan wacdarihii ay dhigtay filimkii shactarada badnaa ee Pyaar Ke sanadii 2006.
7: Dimple Kapadia (Net Worth: $10 Million)
Waa xaqiiq markaad aragteen sawirkeeda inaad soo xusuusateen filimaan badan oo aad ku aragteen Aktaradaan , waxaan ay dhaltaya 8 June 1957.
Dimple Kapadia ayaa kamid ah Hablaha doorka hooyonimada ama maamada sheekada filimka qaata sanadihii dambe ,waxaana ay kasoo muuqatay qiimeeyntaan.
Waxaa ay ku heer tahay Atariishooyinkii kale ee ka dambeeyey waxaana ay heeystaa Aktaradaan $10 Million.
6: Karisma Kapoor (Net Worth: $12 Million)
Gabadha kasoo jeeda qooyska wada Aflaanka ah ayaa kamid noqotay mid kamid ah shaqsiyaadka meelaha ugu wanaagsan kasoo muuqday taxahaan waxaana at Krishma heeystaa $12 Million.
Waxaa ay Aktaradaan doorarka ugu wanaagsan ee ay kasoo muuqatay kamid ah Jigar, Anari, Raja Babu, Raja Hindustani, Dil To Pagal Hai, Fiza & Zubeidaa, waana filimaan badankooda lala dhacay.
5: Ileana D’Cruz (Net Worth: $14 Million)
Ileana D’Cruz waa aktarad u badan filamada Tamil-ka , waxaa filimada Aktaradaan ay kasoo muuqatay Pokiri, Jalsa, Kick, and Julayi.
Waxaa ay sameeysey Aktaradaan hormar fiican dhanka dhaqaale abuurka marka la fiiriyo heerka ay ka joogto daqliga sanadlaha ee la shaqeeysto.
4: Kajol Devgn (Net Worth: $16 Million)
Kajol Devgan uma baahna sharaxaaad iyo faafaahiin ,waxaan dareemayaa inaad aqoon dheer u leedahay ,waxaadse ogaataa inay heerka afaraad kasoo gashay qiimeeynta Atariishooyinka dhaqaalaha ugu badan ay heeystaan.
3: Amrita Rao (Net Worth: $20 Million)
Amrita waxaa ay kamid tahay ataariishooyinka inta badan kasoo muuqda liiskaan marka laga hadlayo arimaha daqliga,waxaana ay kamid tahay seddexda shaqsi ee ugu sameeynta badan dhanka dhaqaalaha.
Aktaradaan ayaa waxaa ay heeystaa $20 Million,waxaana ay inta badan kasoo muuqataa filimada Telugu.
2: Ameesha Patel (Net Worth: $30 Million)
Waxaa ay dhalatay 9 June 1975 , waxaana ay heer wanaagsan ka joogtaa dhanka dhaqaalaha ama daqliga aktaradaha.
$30 Million ayey Aktardaan ku heeystaa Akoonkeeda,waana lacag macquul ah oo hada ku heeysa booskaan labaad.
1: Aishwarya Rai Bachchan (Net Worth: $35 Million)
Aishwarya Rai Bachchan , waa lama taabtaan ,waxaa ay kasoo dhal Fan ,waxaa ay u dhaaxdaa Dhal Fan, waxaa ay dhalatay November 1973.
Sanadii 1994 ayaa Aktaradaan loo doortay gabadhii ugu quruxda badnaa aduunka.
Aflaan caan ah ayey kasoo muuqatay sida Hum Dil De Chuke Sanam, Devdas, Dhoom 2 and Jodhaa Akbar.
Liiskaan Waa 10-ka Atariisho Ee Waqtigaan Ugu Taajirsan Bollywood-ka, Waxaana Idiin Balan Qaadeynaa Inaan Idin La Wadaagno Dhanka Ragga.